AH: သောက်ကြဦးမလား ပန်ဒါ လက်ဖက်ခြောက်
သောက်ကြဦးမလား ပန်ဒါ လက်ဖက်ခြောက်
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ဒေသဟာ ပန်ဒါလေးတွေ မွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဒေသဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ပန်ဒါ ၀က်ဝံ အများဆုံးဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် ပန်ဒါလေးများ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ ဆိုပြီးတော့ ပိုစ့်တစ်ခု တင်ဖူးပါတယ်။ ခု ပိုစ့်ကတော့ ပန်ဒါ လက်ဖက်ခြောက်အကြောင်းပါ။ အဆိုပါ ပန်ဒါစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာနားက လက်ဖက်ခင်းပိုင်ရှင် လိရှိမင် ဆိုသူကတော့ ပန်ဒါ လက်ဖက်ခြောက်ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အဆိုပါ ပန်ဒါစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာက ပန်ဒါဝက်ဝံတွေရဲ့ မစင်တွေကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ပါ။ ဈေးကတော့ သက်သာလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ ၅၀ ဂရမ် တစ်ထုတ်ကို တရုတ်ငွေ ယွမ် ၂သောင်း ၂ ထောင်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ (မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သိန်း ၃၀) ၀န်းကျင် ပေးရတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ပါ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး လက်ဖက်ခြောက်ဖြစ်လာပါပြီ။
ဒီ လက်ဖက်ခြောက် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပွဲမှာတော့ အသက် ၄၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ခင်းပိုင်ရှင်ကတော့ “ကျွန်တော် ခုလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်စေတဲ့ ပန်ဒါ လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် မိုးကောင်းကင်နဲ့ ပထ၀ီ မြေကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခု တကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ဟာ ခုဆိုရင် စွန့်ပစ် အညစ်အကျေးတွေကို အသုံးဝင်အောင်၊ သဘာဝ မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးချနိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတာကိုပါ” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒီလို လက်ဖက်ခြောက် အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲမှာ လိဟာ ပန်ဒါလို ၀တ်ဆင်ထားပြီးတော့ လူပေါင်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို သူ့လက်ဖက်ခင်းရဲ့ ပထမဆုံး လက်ဖက်ခူးပွဲကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရတော့ “ပန်ဒါ ၀က်ဝံတွေဟာ ၀ါး နဲ့ သူတို့အတွက် အဟာရဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ စားသောက်ကြပြီးတော့ အစားအစာတွေထဲက အဟာရ ၃၀% လောက်ကိုသာ အသုံးပြုလို့ ပန်ဒါ ၀က်ဝံတွေဆီက ထွက်လာတဲ့ မစင်တွေမှာ အဟာရဓာတ် ၇၀% လောက် ပါရှိနေပါသေးသတဲ့။” ဒီလို အဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတဲ့ ပန်ဒါ မစင်တွေကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုပြီးတော့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဒီလက်ဖက်ခြောက်ဟာ အနံ၊ အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကဲ…. လက်ဖက်ခြောက်ကတော့ တစ်ကယ်ပဲ အနံ၊ အရသာ ပြည့်စုံလား မပြည့်စုံလားတော့မသိ…. သောက်ချင်သူများ ခါတော်မှီ ပန်ဒါလက်ဖက်ခြောက် ၀ယ်သောက်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါကြောင်း…..
Posted by AH at 3/24/2012 04:51:00 PM
စံပယ်ချို March 24, 2012 at 6:16 PM
Cheetah (သို့) ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး တရိစ္ဆာန်
အနာဂတ်အတွက် ပို့ဆောင်ရေး နည်းသစ် (သို့) Evacuated ...
Littoral Combat Ships (သို့) အနာဂတ်ရဲ့ စွမ်းရည်မြင...
သွားကြဦးမလား ရေအောက်ပြတိုက် (Cancun Underwater Mus...
ရုရှားနိုင်ငံမှာ တွေ့တဲ့ UFO
“လ” ဘယ်က စဖြစ်ပေါ်လာတယ်?
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင် (တဂ် ပို့စ် )
၂၀၁၂ စင်ကာပူ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဘက်ဂျက် ဆွေးနွေးမှု့များ